Office Paswọdu crackers ịgbawa Excel / Okwu / PPT Paswọdu i
Ụlọ ọrụ paswọọdụ crackers
Oge a na-emekarị data nche na paswọọdụ ohere usoro aghọwo-apụghị izere ezere ke otu. N'agbanyeghị mkpa ka e meere gị faịlụ, akara na nche mbipụta dị ka a abụọ kwadoro mkpụrụ ego ahụ. Dị nnọọ ka ị pụrụ ịdị njikere na-gị data ọzọ ma ọ bụ na-erughị nzuzo na ala, i nwere ike ichefu paswọọdụ gị ma ọ agbanwe ya n'amaghị ama. Ebe a bụ ihe ngwọta; Paswọọdụ mgbake software maka Microsoft Office dị online na mgbakwunye na nke karịrị ọnụ ọgụgụ nke paswọọdụ crackers taa. Kama nke ahụ, ụfọdụ n'ime paswọọdụ crackers na-adịghị ọrụ enyi na enyi ma ọ bụ oké obi erughị ala. Mgbe zụọ ahịa n'ihi na ụlọ ọrụ paswọọdụ cracking software, ị kwesịrị ị na itu n'etiti eri na arụmọrụ. Nkọwa e nyere na nkebi a ga-enyere gị aka ịhọrọ n'etiti software àgwà na ndoro oke ime ụlọ gị mkpa.
Office paswọọdụ ọrụ ike ịgbawa kasị Office ngwa faịlụ ọzọ rụọ ọrụ nke ọma ma na dị ọnụ ala karịa eri kwa. Ọbụna ihe na nke a, online ọrụ awade zuru mweghachi nke ohere paswọọdụ echebe Office faịlụ. The pụrụ iche technology eji ịzụlite software ga-enyere otu weghachi ya / ya paswọọdụ n'ime dịghị sekọnd. O doro anya na, Microsoft wuru ya dịgasị iche iche nke paswọọdụ mgbake ngwugwu nke na-agwa elu na-eri nke azụmahịa paswọọdụ crackers. Ọzọkwa, niile Okwuntughe ná mgbanwe nke agwa set na ogologo na-akwado.
Office Paswọdu Software
Free Okwu paswọọdụ / Excel paswọọdụ mgbake software Free Microsoft 9X na mgbe e mesịrị Versions
Office Paswọdu Iweghachite Lastic Personal License $59.95
Business $119.85 Microsoft 97 & Higher nsụgharị
Office Paswọdu Iweghachite Ime Anwansi $47.99 Microsoft 2000 / XP / 2003 / vista ma ọ bụ elu version nke windows
Vodusoft Office Paswọdu Iweghachite Single User $ 69 ma ọ bụ Microsoft 97/2000 / XP & elu version nke windows
Stellar Phoenix Office Paswọdu Iweghachite Personal $59.95
Busines $119.85 Microsoft 2007 & elu nsụgharị
Office Paswọdu Iweghachite toolbox $21.55 Microsoft 97/2000 / XP / 2003
Office Paswọdu Remover $23.95 Microsoft 97-2010
Office Paswọdu Iweghachite Professional Basic $ 60
Ultimate $ 350 MS Office 97 na elu nsụgharị
Ngwoolu Office Paswọdu Iweghachite Basic $ 60
Professional $ 200 Microsoft 95, 97 ma ọ bụ karịa na nsụgharị
Advanced Office Paswọdu Iweghachite Home Edition $ 49
Professional $ 249 Niile nsụgharị nke Microsoft Office
1.Free Okwu / Excel paswọọdụ mgbake software
Ọ bụ free software dị maka download online mepụtara ịrụ ụka elu software-akwụ ụgwọ. Ọ na-arụ ọrụ na windows 9X na mgbe e mesịrị PC nsụgharị. Recovers okwuntughe Excel / Okwu 97 ka Excel / Okwu 2003 faịlụ. Cracks okwuntughe site na-agbalị okwu site na nnukwu akwụkwọ ọkọwa okwu na faịlụ na-agba mbọ na ọtụtụ n'ịgwa maka a egwuregwu. Ọ cracks paswọọdụ ozugbo ọ okụt egwuregwu.
Kemgwucha ngwá ọrụ dị ike maka iguzogide Excel / okwu okwuntughe. Yiri free version nke software awade otu functionalities dị ka azụmahịa software na irè kwa.
N'adịghị ka ọtụtụ free software si, ọ bụ kpam kpam free na ọ bụghị a shareware ma ọ bụ ngosi version ie ọ na-eri niile metere Iji ma ọ bụ nnweta.
Ke adianade do, ọ bụ na ihe ọ bụla malware ma ọ bụ spyware.
Ọ bụ eleghị anya na-ogologo oge n'ihi na ọ na-agụnye ule ọtụtụ ijeri paswọọdụ n'ịgwa.
Ọ bụ obere irè ebe paswọọdụ bụ mgbagwoju ma ọ bụ oké ogologo.
2.Office Paswọdu Iweghachite Lastic
Office Paswọdu Iweghachite lactic ewepu ma ọ bụ naputa okwuntughe si MS PowerPoint, MS Okwu, MS Excel, MS Access na MS Outlook akwụkwọ.
Ọ bụ oru oma ụlọ ọrụ paswọọdụ software ruru eru nke wepụ multiple okwuntughe si a ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ faịlụ ozugbo. Enyere mkpughe nke furu efu VBA paswọọdụ kwa.
Multi-asụsụ nkwado na-nyeere na enyi na enyi na onye ọrụ interface. Paswọọdụ mgbake bụ nnọọ ihe dị mfe ọbụna maka oge mbụ ọrụ.
Na-akwado Microsoft Office XP / 97/2000 2007.
Ọ na-enye nchebe maka nso nke akwụkwọ ụdị; Panèl nchebe okwuntughe, okwuntughe gbanwee, Ebe M Dere na workbook okwuntughe (Nani Excel), onye ọrụ workgroup (naanị Access) na nchekwa data.
N'agbanyeghị nke mgbagwoju anya nke paswọọdụ, software na-ewe nanị ole na ole nke abụọ na ịgbawa a paswọọdụ.
Ozi nzuzo na-nditịm-eche nche megide n'enweghị ikike ohere.
The mbụ akwụkwọ na-adịghị gbanwetụrụ. Usoro ihe omume na-arụ ọrụ a oyiri nke akwụkwọ na-enweghị na-agbanwe agbanwe ihe odide mbụ.
The software dị na a na-eri. Ndị na-eri niile metere nwere ike ịdị oké ọnụ ma na nanị a nyere onye ọrụ.
3.Office Paswọdu Iweghachite Ime Anwansi
Na-eji software naghachi ma chefuo ọ bụ furu efu paswọọdụ. Ya tumadi na-emetụta n'ihi agbake agụ naanị paswọọdụ echebe faịlụ. Nso nke ngwa faịlụ na-agụnye; .doc, .ppt, .xls, .mdb na Office 2007 faịlụ formats.
Onye ọrụ interface e mere na-aka na kpọmkwem search. Ọrụ ndị na-enwe ike ịtọ parameters ka kpọmkwem nso nke paswọọdụ ha mkpa ịchọ ie udi na ogologo nke paswọọdụ. Alternatively, ọrụ nwere ike iji akwụkwọ ọkọwa okwu a quicker paswọọdụ egwuregwu.
Naghachi furu efu ma ọ echefu paswọọdụ ọzọ ngwa ngwa.
Recovers-agụ-nanị okwuntughe MS Excel, okwu, PowerPoint na Access.
Ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface.
Echichi dị mfe
Dynamic; onye ọrụ nwere a dịgasị iche iche nke nhọrọ ịhọrọ site nọ na-agbake ha paswọọdụ.
Ọ bụ dịtụ oké ọnụ iji nweta ma ọ bụ ohere n'ihi na ọ bụ azụmahịa software.
Ọ na-arụ ọrụ maka Microsoft Windows 2000 / XP / 2003 / vista na elu version ma ọ bụghị okenye na nsụgharị dị ka Windows 95/98.
4.Vodusoft Office Paswọdu Iweghachite
The software e mere kpọmkwem maka mgbake nke echefu / furu efu paswọọdụ maka MS PowerPoint, Access, Outlook, Excel na Okwu. The software sụgharịa atọ ụdị agha: Dictionary Mmegide, arụrụala Force Mmegide na Nkpuchi Mmegide na arụrụala-Force Mmegide. Ọ na-ukwuu kachasị naghachi kemgwucha mgbagwoju paswọọdụ na elu na-agba arụmọrụ.
O doro anya na, ọ na-akwado akwụkwọ ụdị: MS Outlook (* .pst), Okwu (* .doc, *. Docks), Access (* .mdb, *. Accdb), PowerPoint (* .ppt, *. Pptx) na Excel ( * .xls, *. xlsx)
Ukwuu kachasị iji belata oge maka cracking paswọọdụ.
Na-akwado ATI (Advanced Technology Interface) video kaadị ngwaike osooso.
Ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface na nke kacha nta nghọta chọrọ.
The software rụrụ na-agụ-na-ọrụ na onye ọrụ akwụkwọ mgbe agbake a paswọọdụ. Nke a adọ aka ná ntị megide mmebi ọ bụla ụlọ ọrụ akwụkwọ.
Mgbake results na-akpaghị aka zọpụta maka ọzọ ojiji.
Usoro ihe omume na-akwado na akpaaka shutdown ọrụ Ozugbo paswọọdụ gbakee.
Mmelite free maka ọhụrụ nsụgharị wepụtara.
Trial version nke software naanị-akwado ihe 4 agwa paswọọdụ cracking.
5.Stellar Phoenix Office Paswọdu Iweghachite
Ihe omume ahụ bụ ihe oru oma na ngwa ngwa n'ihi na-agbake okwuntughe setịpụrụ na-MS Office faịlụ na ma na-emeghe ma ọ bụ gbanwee ihe onwunwe.
Ọ na-arụ ọrụ kasị version nke MS Office.
Ya ọzọ atụmatụ-enyere mmadụ aka ezipụta kwere omume nso nke paswọọdụ ogologo.
The software cracks na paswọọdụ site generically ekekọta si a Nchikota odide nke nyere ogologo.
ezie na software rụrụ mgbake, ọ na-egosi usoro ọnọdụ dị ka na-atụ anya ẹkụre oge na-agba.
Agbake -'Password gbanwee ma ọ bụ 'Paswọdu imeghe' n'ihi na MS Office faịlụ.
Mîdaha ndị arụrụala-Force agha ka naghachi okwuntughe ọzọ n'ụzọ ziri ezi.
Mmemmem masking nke usoro iwelata mgbake oge
Usoro ihe omume na kachasị ịnọgide na-enwe ike akwụkwọ ọkọwa okwu na e dere niile natara okwuntughe.
The ngwá ọrụ awade ọrụ a dịgasị iche iche nke nhọrọ maka mfe mgbake ma ọ bụ cracking nke mgbagwoju okwuntughe n'ime-adịghị.
Usoro ihe omume site a log anya akụkọ nke dum paswọọdụ mgbake usoro na ike ga-echekwara na faịlụ maka akwụkwọ.
The software nwere ike na-arụ ọrụ kasị mma maka N'ọnọdụ nile nke paswọọdụ mgbalị.
6.Office Paswọdu Iweghachite toolbox
The ụlọ ọrụ paswọọdụ mgbake ngwá ọrụ na-akwado MS Access, Okwu ahụ, Outlook, Excel, PowerPoint na VBA oru ngo. Ya atụmatụ dị ka ngwa ngwa search-enye ohere maka mgbake nke na nso nso meghere Office akwụkwọ. Iji software ngwá ọrụ dị mfe ruru ka ikenyeneke mbiet interface mepụtara maka ọrụ. Cracking a paswọọdụ fọrọ nke nta na-ewe sekọnd ole na ole kwa. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka Office 97 / XP / 2000/2003/2007/2010.
Na-enye ihe nzi mgbake ma ọ bụ mwepụ nke okwuntughe sitere na site MS PowerPoint, VBA oru ngo, Access, Okwu ahụ, Outlook, Excel, workgroup okwuntughe (naanị Access), Ebe M Dere & workbook okwuntughe (naanị Excel) na nchekwa data okwuntughe.
Na-akwado multi-lingual interface na nnọọ mfe iji.
Ngwa ngwa na-ewepu na nso nso meghere Office akwụkwọ n'elu malite.
Usoro ihe omume accesses a pụrụ iche nkesa na nwere ike imebi MS Excel na MS Okwu echebe akwụkwọ n'agbanyeghị ike ma ọ bụ ogologo.
Ukwuu nchebe maka agbake ọmụma n'ime akwụkwọ.
Ọ bụghị irè n'ihi na ụfọdụ akwụkwọ nsụgharị na-adịghị ekwe ka mwepụ ma ọ bụ mgbake nke ụfọdụ ụdị nke okwuntughe.
7.Office Paswọdu Remover
The software bụ otu n'ime ndị kasị mgbe ọ na-abịa paswọọdụ mgbake ma ọ bụ mwepụ. Ọ nwere ike na wepu ma ọ bụ Ị kpọghee ekwt ma Excel na Okwu akwụkwọ na sekọnd. Ya ma obu na-emetụta ndị arụrụala-Force Usoro ma ọ bụ na-eji Office Paswọdu Remover wepụ paswọọdụ ozugbo. The software akwado MS Okwu 97 to2010 (.doc) na MS Excel 97 ka 2010 (.xls) .Ọ bụ dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP, Windows nkesa 2008/2003/2000 x32bit ma ọ bụ x64bit.
100% mgbake ọnụego furu efu MS Okwu / Excel okwuntughe.
Na-akwado MS Okwu / Excel 97-2010 na metụtara ụdị faịlụ ntụgharị Excel (* .xls) na Okwu (* .doc).
The software na-ukwuu kachasị maka multiprocessor usoro maka oké mgbake gbapụrụ ọsọ.
Onye ọrụ interface dị mfe na ahaziri maka novice ọrụ
Ọzọ online ọrụ na-awa na kacha nche na nzuzo na-ekwe nkwa.
Ọ na-anaghị paswọọdụ ogologo ma ọ bụ complexity
Usoro ihe omume na kachasị na-akwado otutu asụsụ.
Trial mbipute a software naanị ule MS Okwu / Excel akwụkwọ na-echebe na "emeghe onwunwe" ma ike-emeghe ya ma ọ bụrụ ka echebe.
8.Office Paswọdu Iweghachite Professional
Office Paswọdu Iweghachite Professional enye irè ngwọta Microsoft Office omume. Office Paswọdu Iweghachite-arụ ọrụ niile nsụgharị nke MS Office. Ọ na-akpaghị aka obtains niile edezi na formatting mgbochi, na-akọrọ nchebe paswọọdụ na ekpochi mkpụrụ ndụ.
Recovers okwuntughe fọrọ nke nta n'otu ntabi n'agbanyeghị ogologo ma ọ bụ complexity.
Awade ọtụtụ asụsụ nkwado na ike naputa Cyrillic odide, Latin na hieroglyphics.
Ukwuu ike nke na ijikọta abụọ na ụdị agha (arụrụala Search, Smart search na akwụkwọ ọkọwa okwu dabeere na) ma ọ bụ itinye ha otu otu.
The software woks n'otu ntabi maka adịghị ike ọrụ okwuntughe.
Ya n'ibu ọtụtụ faịlụ n'out oge na enwekwukwa paswọọdụ mgbake ọsọ.
Ukwuu ahaziri arụmọrụ na omume mkpa mode na nhọrọ maka inye paswọọdụ ọmụma.
Paswọọdụ ga-natara site nnọọ a button click n'ihi ya mfe interface.
The Auto Save mma bụ nnọọ adaba n'ihi na ọrụ.
Professional nkwado na free update maka ruo ọnwa 12.
Trial version nke software adịghị enye niile functionalities.
9.Accent Office Paswọdu Naghachi.
The software software dị na a ọnụ ọgụgụ nke iche .Ọ-akwado ndị niile faịlụ formats site na Open Office ma ọ bụ MS Office sitere na site ọ bụla afọ.
-Arụ ọrụ maka windows 7/8 na mbụ nsụgharị.
Usoro ihe omume na-arụ ọrụ majorly ụzọ atọ; akwụkwọ ọkọwa okwu, arụrụala ike ma ọ bụ nkpuchi ọgụ.
The software na-akpaghị aka naputa okwuntughe na ọzọ arụmọrụ maka ọrụ-kọwaa ma ọ bụ predefined parameters.
Mutation iwu ike-atụkwasịkwara akwụkwọ ọkọwa okwu ahụ site gụnyere nnukwu asụsụ arụmọrụ.
Na-akwado Nwada Office 2000 2013 na OpenOffice 1-4
Nvidia na AMD graphic kaadị nwee ịchọ ugboro 40 ngwa ngwa.
Oru oma gbapụrụ ọsọ niile Intel na AMD processors.
Usoro ihe omume na-enye ihe kasị mma arụmọrụ ikwu na ya price.
Di 'kacha ohere na decryption nke Okwu na Excel 97/2000 faịlụ.
Ọ nwere ọzọ GPU nkà na ụzụ na bụ ike nke na-agbake toughest paswọọdụ encryptions
Trial nsụgharị nanị na-egosipụta mbụ na nke abụọ nnọchianya nke paswọọdụ, anaghị zọpụta mgbake ọnọdụ faịlụ na-agbaba n'ihi na ogologo oge.
10.Advanced Office Paswọdu Iweghachite
Advanced Office Paswọdu Iweghachite anọchi, naputa na ewepu okwuntughe si echebe MS Office akwụkwọ fọrọ nke nta ozugbo. Ọ na-akwado niile nsụgharị nke Microsoft ụlọ ọrụ. The software unlocks akwụkwọ Hangul Office na Open Document formats. Tụkwasị na nke a, ọ naputa Access, Excel, Outlook, Project, PowerPoint, Visio, Ego, nkwusa, Okwu na OneNote okwuntughe. Ọ ịkpa na backdoor Usoro Ị kpọghee ekwt ọ bụla na-echebe VBA oru ngo na tọgharịa MS internet Explorer ọdịnaya.
Ọ na-akwado Hangul Office akwụkwọ
The software n'otu ntabi naputa okwuntughe n'ihi na otutu ngwaahịa.
Ị kpọghee ekwt akwụkwọ na mbụ natara paswọọdụ ozugbo.
Ọ explores niile mara aghụghọ na backdoors ke Office ezinụlọ ntabi mgbake.
Ọzọ ngwaike osooso ike ebelata paswọọdụ mgbake oge site a na-akpata nke 50.
The software na-ukwuu kachasị na ala-larịị koodu ntọt arụmọrụ.
Usoro ihe omume e mere na-ahu nagide CPU oge ọzọ rụọ ọrụ nke ọma.
Na ịrị elu nke ọhụrụ nsụgharị dị ka MS Office 2013, na-agbake site ike nche-aghọ ihe mgbu na-adịghị na adighi ike ọbụna na enyemaka nke GPU accelerated gburugburu.
VBA Iweghachite Okwuntughe ngwá ọrụ
Paswọọdụ Iweghachite Ngwá Ọrụ
Excel Ngwá Ọrụ VBA Paswọdu Iweghachite http://www.excel-tool.com $29.95 Microsoft Excel 97/2000 / XP / 2003/2007 ma ọ bụ karịa.
VBA Paswọdu Iweghachite nna ukwu http://www.rixler.com Personal $29.95
Bussines $59.85 MS Okwu, MS Excel, MS Outlook 97/2000 / XP / 2003/2007/2010, MSPowerPoint 2007/2010.
VBA Paswọdu http://lastbit.com/register.asp $ 39 Microsoft Office 97 ka 2007
Advanced VBA Paswọdu Iweghachite http://www.openwall.com/cgi/redirect.cgi?elcomsoft-vba $ 79
Professional $ 199 Microsoft Office 97 ka 2007
Tọgharịa VBA Paswọdu http://store.esellerate.net/s.aspx?s=STR2648995036 $29.00 Microsoft Office 2007-2013
1.Excel Ngwá Ọrụ VBA Paswọdu Iweghachite
The software ngwa e mere na-naghachi vba echebe oru ngo faịlụ na extensions dị ka (.xls, .xlam). Ọ Recovers ma chefuo na efu paswọọdụ. Ngwa-akwado mgbake nke okwuntughe nke ọ bụla ogologo ma ọ bụ complexity.VBA ngwa na-akwado ndị ọzọ mgbake maka MS Excel 97 ka 2010 faịlụ formats okwuntughe. Ya imewe na ngwa nwere ike mfe naghachi ma ọ bụ na-emeghe VBA oru ngo na-echebe okwuntughe.
Software chọrọ: Nwada Excel 97 / XP / 2000 2007 ma ọ bụ karịa.
Ugbu A Version: 10.6.1
File Size: 0,5 (MB)
Ọ bụ na ọdabara maka niile paswọọdụ tinye mgbalị na mgbagwoju.
Jiri kọmputa ego ọzọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ọdabara maka kasị Microsoft Excel nsụgharị
Software dị ka a Freeware.
Easy ọrụ interface ndị ọzọ arụmọrụ buttons.
The software dị mfe iji nweta ma kesaa.
Ọ bụ dịtụ ngwa ngwa mgbe agbake mgbagwoju ma ọ bụ ogologo okwuntughe.
Ọ bụ naanị na ọdabara ole na ole MS Excel faịlụ formats.
2.VBA Paswọdu Iweghachite nna ukwu
VBA Paswọdu Iweghachite nna ukwu software eme kpọmkwem mgbake nke paswọọdụ maka Microsoft Office akwụkwọ. Ọ na-akwado MS Excel, Okwu ya, PowerPoint na Outlook. The software egosiputa paswọọdụ na ihuenyo ozugbo Ọ cracks ya. Ọ na-akpaghị aka na-enyocha n'ihi echebe akwụkwọ n'ime Office faịlụ na site paswọọdụ ozugbo.
Ọ cracks VBA oru ngo okwuntughe na Outlook, PowerPoint, Excel na Okwu akwụkwọ ozugbo.
Usoro ihe omume nkwado niile bụ isi nsụgharị nke Microsoft Office ngwaọrụ ntụgharị Outlook, PowerPoint, Excel na Okwu akwụkwọ (97/2000 / XP / 2003/2007/2010 nsụgharị).
The akpaaka-search ọrụ na-enyere ndị ọrụ na-chọta niile VBA oru na Microsoft Office akwụkwọ na okwuntughe na naputa ha okwuntughe.
Na-enye 100% pụrụ ịdabere na paswọọdụ mgbake ma ọ bụ iwepụ maka VBA oru ngo.
The weghachiri eweghachi paswọọdụ depụtaghachiri ka clipboard maka echiche gị.
Ọ bụ iji weghachi furu efu okwuntughe VBA na nke kacha nta mgbalị.
Ọ bụ nnọọ nchebe.
The software adịghị n'ụzọ zuru ezu na-akwado Microsoft Office 2013 nsụgharị.
VBA Paswọdu software naputa gị data ka nnọọ ikpeazụ bit. Ọ nwere ike na-agbake paswọọdụ maka VBA oru ngo dị iche iche modul (Excel na Okwu akwụkwọ, Access, ọdụ data). Ọzọkwa, ọ na-akwado eluigwe na ala VBA paswọọdụ mgbake ọdabara maka niile VBA ngwa.
VBA-arụ ọrụ na abụọ bụ isi mgbake engines: nke mbụ e mere maka MS Access, Excel na Okwu faịlụ. Ọ na-akwado Access XP / 2003 na niile nsụgharị nke Excel.
Nke abụọ usoro mîdaha a eluigwe na ala mgbake Usoro na mmemmem mgbake nke VBA modul ọ bụla ngwa. Arụrụala-ike agha na-eji na-agbake okwuntughe maka Office 2000 / XP akwụkwọ.
Ezi version nke VBA mgbake ngwá ọrụ bụ ike nke na-agbake niile okwuntughe na Office akwụkwọ ziri ezi na Nwada Office 97.
Ọ bụrụ na ndị cracking na-ewe ogologo, ihe ọzọ otú a ga-agbaso site resetting paswọọdụ a maara otu.
Ọ na-enye nzi ohere paswọọdụ-echebe VBA oru ngo.
The software na-enye onye ọzọ eluigwe na ala mgbake usoro na-enyere mgbake nke VBA oru ngo na ọ bụla ngwa
Ya mgbe ụfọdụ na-ewe ogologo oge na-agbake ihe mgbagwoju ma ọ bụ ogologo okwuntughe.
4.Reset VBA Paswọdu
Tọgharịa VBA paswọọdụ bụ a software ịba uru maka iguzogide paswọọdụ echebe VBA oru ngo modul na Microsoft Office akwụkwọ (Okwu, Excel, Project na Ike Point). Ọ na-ebe etinyere na Office akwụkwọ na ndị ọzọ ngwa na-eji VBA macros. Usoro ihe omume na-eme ka ụlọ ọrụ a mma gburugburu ebe obibi site automating kasị ụlọ ọrụ task.All iwu nsụgharị nke MS Office si 97, XP, 2003 2007 na-akwado.
Ọ na-akwado ọhụrụ nsụgharị nke MS Office (2007 ka 2013) na ihe niile iwu nsụgharị nke 97, 2000, XP na 2003.
The software naputa niile ụdị okwuntughe (multi-lingual okwuntughe gụnyere).
Usoro ihe omume na-akwado iwu akara na-agba ọsọ ngwa na ogbe mode.
Ọ na-ewepu paswọọdụ na ntukwasi-obi na-enweghị emebi onwe faịlụ ma ọ bụ akwụkwọ na akpaka backups.
Ọ na-adịghị akwado Nwada Access na Outlook faịlụ formats
5.Advanced VBA Paswọdu Iweghachite
Software dị ka a azụmahịa-adịghị adị software site ElcomSoft. Usoro ihe omume cracks furu efu ma ọ echefu okwuntughe Anya Basic maka Ngwa (VBA) na dezie ma ọ bụ na-ele mode. The software akwado Nwada Outlook, Access, Okwu, Project, Excel, Visio na PowerPoint akwụkwọ. Ọ nwere ọzọ ike nke akpọchi echebe Excel tinye-ins. Luckily; ọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ na VBA nyeere ngwa dị ka WordPerfect Office, Corel na AutoCAD. Niile nsụgharị nke MS Office (97 ruo 2007) na-akwado-ma ọ bụghị site backdoor ma ọ bụ ozugbo.
Ekwurịta niile paswọọdụ echebe VBA faịlụ ọzọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ na-akwado ndị ọzọ ọrụ maka akpọchi Excel tinye-ins.
The software naputa VBA okwuntughe ọzọ ozugbo.
Ọ naputa paswọọdụ maka VBA isi koodu
The VBA Paswọdu Iweghachite software akwado kasị nsụgharị nke Microsoft Office akwụkwọ faịlụ formats.
The software adịghị n'ụzọ zuru okè na-arụ ọrụ maka ọhụrụ version maka Microsoft Office (Nwada Office 2013).
Ọ na-aghọ nnọọ ngwa ngwa mgbe paswọọdụ ogologo bụ ogologo oge ma ọ bụ karịa mgbagwoju.
Olee otú ịgbawa Microsoft Access Paswọdu
Bara uru Way Iji nyere gị aka Idozi Windows Blue ihuenyo na buut
Hotmail Paswọdu esi: Olee ịgbawa / mbanye anataghị ikike gị Hotmail Okwuntughe
Olee otú Idozi Vista Blue ihuenyo Njehie
Olee otú ele History na Internet Explorer
Ụzọ dị iche iche Idozi Ne wdg Files
Ihe bụ na otú ndozi Faultrep.dll Error
Olee otú Idozi Crypt32.dll Error
> Resource> Utility> Office Paswọdu crackers ịgbawa Excel / Okwu / PPT Paswọdu